ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166 | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
နေအိမ် → ဟွန်ဒါ → Honda rc166 six cylinder bike from the 1960s
20 ဇွန် 2015 | စာရေးသူ: dima | ဟာ Off comments အပေါ် ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166
Read more on the Honda RC166 250/6. Grand Prix ပြိုင်ကားအစောပိုင်း 1960 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးတော်လှန်ရေးခံယူ. ဟွန်ဒါရဲ့ခြောက်ဆလင်ဒါလျင်မြန်စွာစုဝေးရောက်လာကြ၏.
အဆိုပါဟွန်ဒါ RC166 ခြောက် Cylinder ၏အသံထွက်ကိုစစ်ဆေးပေါင်း crank အောက်က link ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု. တချိုမြိန်အသံဆိုင်ကယ်ဖြစ်ပါတယ်. ငါမရောက်မှီအလယျပိုငျး-အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်နှစ်ပေါင်းအပေါ်တဦးတည်းကိုကြား. ဒါဟာကိုစေလွှတ်.
Le Mans ပေါင်းထုတ်လုပ်မှုစက်ဘီးဖို့ရော်ဘာအဖြစ်. ဟွန်ဒါသင်္ဘောခြောက်ဆလင်ဒါ DOHC ယင်း၏နဲ့အဖြစ်မှန် powerplant စေသွားလေ၏. ဟွန်ဒါနှင့်အတူ 1960 ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေတဲ့.
တစ်ဦး 50 cc သုံးဆ, တစ်ဦး 125 cc ခြောက်လဆလင်ဒါပေါင်းတစ် V8. အခုသူတို့အချို့ရှိ5အဆိုပါဟွန်ဒါခြောက်လထက်မြင်းများကိုပိုမို. ၏ RC166 1967 ကဲ့သို့တူညီသောဆိုင်ကယ်ဖြစ်ပါတယ်.
1960 pt2 ၏အဖြစ်ဟွန်ဒါ RC166 ခြောက်ဆလင်ဒါဆိုင်ကယ်: ဟွန်ဒါ RC166 သတင်းအချက်အလက်: ဟွန်ဒါ RC166 နောက်ခံများ. ဟွန်ဒါ RC166 အကြောင်းကိုကြေးနန်း. အမည်ပြောင်: မှတ်ချက်:
၏အဖြစ် 1960, ဟွန်ဒါဝင်ကြ၏. ဂျပန်ပြိုင်ကားစက်တွေခြောက်ဆလင်ဒါရက်ရက်ရောရောခဲ့ကြသည်. တစ်လမ်းပေါင်းပြိုင်ပွဲစက်ဘီးအကြားသတ်မှတ်ချက်အတွက်ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ခဲ့သည်.
အကျင့်ကိုကျင့် Motocross စက်ဘီးများအတွက်. ဟွန်ဒါစူပါမွမ်းမံထားသောဆိုင်ကယ်အတွက်၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ကယ်မဝင်ရစတင်.4တစ်ခုချင်းစီကိုဆလင်ဒါအဘို့အဆို့ရှင်: RC143: 1960: အမွှာပူး: 44 × 41 မီလီမီတာ: 124.68 cc (8.
ခြောက်နှင့်အတူဟွန်ဒါရဲ့ပထမဆုံးထုတ်လုပ်မှုမော်တော်ဆိုင်ကယ်ခဲ့သည်. ဟွန်ဒါခြောက်လဆလင်ဒါနှင့်အတူတည်ဆောက်သောပထမဦးဆုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များတွင်အသုံးပြုခဲ့သည့် RC166 250cc ပြိုင်ပွဲစက်ဘီးခဲ့သည်.
ဟွန်ဒါပြိုင်ကား – အပိုင်း 1. ဟွန်ဒါပြိုင်ကား 1960 ;. ဟွန်ဒါ 250cc RC166. အသစ်တစ်ခုကိုခြောက်လဆလင်ဒါပုံပေါ်. ဒီဆိုင်ကယ်ကတော့ RC166 ထက်သိသာ သာ. ကြီးမြတ်သည်ပုံရသည်.
ဟွန်ဒါ RC166 ဖုန်းမြည်သံ. This time it’s Mike Hailwood flogging his foolish inline 6-cylinder RC166 works race bike, careful by many to be the acme of 1960′s.
1960 pt2 ၏အဖြစ်ဟွန်ဒါ RC166 ခြောက်ဆလင်ဒါဆိုင်ကယ်
ဟွန်ဒါ 2506Cylinder Motorcycle RC166. The Honda6Cylinder racing motorcycle on Daytona track in Florida in 1995. 1960’s Honda Factory Tour
Just imagine what Honda’s rivals ought to have complete of the following specification back in 1966. 4-လေဖြတ်ခြင်း, inline 6-cylinder. Honda RC166 | Bike EXIF.
Honda 250CC –6cylinder, Honda 125CC –5cylinder start-up. Mike Hailwood IOM TT 500CC ﻿ ﻿ Favoriten;. 1960 pt2 ၏အဖြစ်ဟွန်ဒါ RC166 ခြောက်ဆလင်ဒါဆိုင်ကယ်
Went to the bike show here in London plus was preserved to the rare firing up ofa1966 ဟွန်ဒါ 6. Other Bikes/Non-hawk Chatter; 1966 ဟွန်ဒါ6(RC166). 1960: Inline-4.
2014 Honda Civic Preview J.D. စွမ်းအား
20.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Repsol ဟွန်ဒါ – ဗီဒီယိုကိုစွယ်စုံကျမ်း
Ducati Desmosedici GP11 Brammo Enertia Moto Guzzi 1000 Daytona Injection ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix ဆူဇူကီး Colleda CO ဆူဇူကီး AN 650 မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic စက်ဘီး Kawasaki ER-6n Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 ဟွန်ဒါ DN-01 KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး Ducati Diavel Aprilia Mana 850 ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို Ducati 60 Bajaj Discover စမတ် eScooter ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို